Talk2DVB (၁၄ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၅)
447 April 2, 2015
14-01-2015 နေ့တွင်ထုတ်လွှင့်မည့် Talk2DVB အစီအစဉ်တွင်…. ယနေ့ရန်ကုန်မြို့တွင်း ဘက်စ်ကားလိုင်း သီးသန့်သွားလာနိုင်ရန် ဘလောက်တုံးချခြင်း အစီစဉ်မှာလမ်းရှင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်သဖြင့် ကောင်းသလိုလိုနှင့် အခက်ခဲဖြစ်နိုင် ကြောင်း— မကွေးတိုင်း မကွေးမြို့မှာ ညစဉ်ညတိုင်း ၉နာရီခန့်မှစပြီး အိတ်ဇောတပ် ဆိုင်ကယ်နှင့် ကားများ အပြိုင်အဆိုင်မောင်းနေခြင်းကိစ္စ— ရပ်စောက်မြို့ တရားမဝင်သစ်စက်များ အကြောင်း ဒုတိယပိုင်းလို့ ပြောရမဲ့ အကြောင်းအရာများး…. ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဘုရားကြီးမြိုပမှ ပဲခူးမြို့သို့ အသွား၃၀၀ ကျပ်ပေးရပြီး အပြန်ဆိုရင်တော့ ၅၀၀ ကျပ်ပေးရခြင်းကိစ္စ— စစ်ကိုင်းတိုင်း အင်းတော်မြို့နယ် နတ်မဟုတ်ကလေးရွာအတွင်း နှင့် ရွာနီးပတ်ဈန်းကျင် ရထားလမ်းဘေး ယာတဲများတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးများ ရောင်းချသူနှင့် သုံးစွဲသူများ ပေါနေခြင်း ကိစ္စ– လှည်းကူးမြို့နယ် ဥယျာဉ်ဝရွာ လျှပ်စစ်မီး ကိုယ်ထူကိုထသုံးတုန်းက နှင့် သက်သာအောင် အစိုးရမီတာကိုပြောင်းသုံး တာနှင့် …Read more »
Talk2DVB (၄ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၅)
470 April 2, 2015
04-01-2015 နေ့တွင်ထုတ်လွှင့်မည့် Talk2DVB အစီအစဉ်…. စစ်ကိုင်းတိုင်း ရွှေဘိုခရိုင် ကျွန်းလှမြို့နယ် ညောင်ကိုင်းကျေးရွာ နှင့် လိပ်ဆင်းတောင်ကျေးရွာမှာ GSM တာဝါတိုင်တည်ဆောက်နေတာ တစ်နှစ်ကျော်နေပြီး ယနေ့တိုင်သုံးမရတဲ့အကြောင်း… ထားဝယ်ရေဖြူ လမ်းတံတားများကိုတာဝန်ယူတည်ဆောက်နေသော လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံရေးစစ်ဆေးပေးရန်…. ဝန်းသိုမြို့နယ်တွင် မှန်ကန်သောနှုန်းထားဖြင့် လျှပ်စစ်မီးရရှိရန် တင်ပြခြင်း အကြောင်း.. ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးတွင် အများပြည်သူများ သတင်းပို့ဆက်သွယ်နိုင်ရန် Email Box ထားရှိစေလိုကြောင်းးး လိုင်စင် အင်ဂျင်နီယာကြေးအား ယာ/အုံမှ ရှစ်သောင်းမှ ခြောက်သိန်းထိတိုင်းမြှင့်ပြီး၊ ယခုသက်မှတ်သော မှတ်ပုံတင်ကြေးမှ ယခင်လွန်ခဲ့သော ၂၅ နှစ်ကပေးသွင်းငွေနုတ်ကာ လိုငွေထပ်မံပေးသွင်းရမည်ဆိုသောကိစ္စ…. အစရှိသည်တို့ ကိုဖတ်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါတယ်…. တင်ဆက်-သီတာ၊နေဇော်နိုင် ရိုက်ကူး-အိသူဇာ၊ နန်းသိဂီင်္၊ ကြည်သာအေး တည်းဖြတ်-အိသူဇာ
Talk2DVB (၁ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၅)
01-01-2015 နှစ်သစ် Talk2DVB အစီစဉ်တွင် တောင်တွင်းကြီးမြို့ကမူလတန်းဆရာအတတ်ပညာသင်တန်းဆင်းတွေကို သွားလာရခက်ခဲပြီး အလွန်ဝေးတဲ့ကျောင်းတွေကို မြို့နယ် ပညာရေးမှုးက ပူဇော်ပသတာမလုပ်သောကြောင့်ပညာပြသတာဆိုသောအကြောင်း—— မတ္တရာမြို့နယ်တွင် အုပ်ဖိုအများအပြား ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် အနည်းနားရှိကျေးရွာများတွင် မြေများပျက်စည်းခြင်း ကိစ္စ—– မြန်အောင်မြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် ဆရာဝန်မှာ ဆေးရုံအုပ်နှင့် လက်ထောက်ဆရာဝန် တစ်ဦးသာ ရှိနေသောကြောင့် လူနာများခက်ခဲ နေသောကြောင့် တာဝန်ကထမ်းဆောင်ရန် ဆရာဝန်ချထားပေးပါရန်ကိစ္စ အစရှိသည်များကို ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်…..
စလင်းမြို့ ပြည်သူဆေးရုံက အခက်အခဲတွေအပေါ် သူတို့ပြောစကား
628 April 1, 2015
စလင်းမြို့ ပြည်သူဆေးရုံက အခက်အခဲတွေအပေါ် သူတို့ပြောစကား ရိုက်ကူး / တည်းဖြတ် – DVB
517 April 1, 2015
No comment ရိုက်ကူး – ဥာဏ်ကြီး၊ ရန်နိုင် တည်းဖြတ် – သူသူအောင်
471 March 31, 2015
No comment ရိုက်ကူး – အောင်အောင် တည်းဖြတ် – မောင်တူး
မီဒီယာကို ဖိနှိပ် တိုက်ခိုက်မှုအပေါ် သူတို့ ပြောစကား
513 March 31, 2015
မီဒီယာကို ဖိနှိပ် တိုက်ခိုက်မှုအပေါ် သူတို့ ပြောစကား ရိုက်ကူး / တည်းဖြတ် – လင်းဆက်အောင်